राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालले नयाँ कार्यको बिस्तार गर्ने भएकोछ।
Home∕समाचार∕राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालले नयाँ कार्यको बिस्तार गर्ने भएकोछ।
October 24, 2016 October 24, 2016 koselihk 0
२४ अक्टुवर २०१६
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालले नयाँ कार्यको बिस्तार गर्ने भएकोछ। महावीर पुनको अग्रसरतामा संचालित उक्त अभियान अन्तर्गत निम्न कामहरुको सुरुवात हुनलागेको आविस्कारकेन्द्रले जानकारी गराएको छ।
१. नयाँ वायरलेस प्रविधिको परिक्षण – नेपालमा पहिलो पटक TV White Space Technology र VHF Technology को परिक्षण गर्दैछौं। यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर दुर्गम गाउँहरुमा इन्टरनेट सेवा बिस्तार गर्न कतिको फाइदाजनक छ र आर्थिक रुपमा कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराको परिक्षण गरिदै छ. त्यसको लागि 192 MHz – 202 MHz र 560 MHz – 578 MHz को रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अनुमति नेपाल सरकार बाट लिइएको छ. यसको लागी चाहिने उपकरणहरु आइसकेको छ. परिक्षणको काम केहि समय पछी सुरु हुँदैछ. परिक्षणको लागी गोरखा जिल्लाको उत्तरी भेकका नुब्री, सिर्दिबास, केरौन्जा, जस्ता अति दुर्गम गाउँहरु छानिएकोछ. यसको परीक्षण तराईको समतल र धेरै रुखहरु भएको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि हुनेछ. यो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर दुर्गम पहाडहरुमा र तराईका दुर्गम गाउँहरुमा इन्टरनेट पुर्याउने काम पक्कै पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो बिश्वास छ। यो परिक्षणमा सहभागी हुन चाहाने technical engineer हरुले सम्पर्क गर्नु होला।
२. Smart Village को मोडेल बनाउने कार्यक्रम – नेपालका गाउँहरुमा इन्टरनेट पुर्याएर मात्र पुग्दैन। इन्टरनेटलाई प्रयोग गरेर कसरी गाउलेहरु लाई अधिकतम फाईदा दिन सकिन्छ र गाउँहरु लाई कसरी Smart Village (बाठो गाउँ) बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको पनि हामीले मोडेल तयार गर्दै छौं। हामीले त्यो मोडेलको परिक्षण १० ओटा गाउँहरुमा गर्ने छौं. हुन त धेरै देशहरुमा शहरहरु लाई Smart City बनाउने कामहरु भै रहेको छ र नेपालमा पनि Smart City हरु बनाउने भन्ने चर्चा चलेकोछ. तर हाम्रो उदेश्य गाउँहरु लाई कसरी Smart Village बनाउने भन्ने हो। यो काममा volunteer गर्नको लागी जोस, जाँगर र सृजनसिल आइडिया भएको बिद्यार्थीहरु, technical engineer हरु र सामाजिक अभियन्ताहरुले सम्पर्क गर्नु होला। यो कामको लागी धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरुको सुझाब र सहयोग चाहिन्छ।
३. पुराना ब्याट्रीहरुको क्षमता बढाउने परिक्षण – नेपालमा टेम्पो, रिक्सा चलाउन, सोलारबाट बत्ति बाल्न, अफिसहरुमा backup power को लागी र अन्य धेरै कामहरुको लागी ब्याट्रीको प्रयोग प्रसस्त मात्रामा भै रहेकोछ। त्यस्ता ब्याट्रीहरु को उचित सम्भार नभएर छिट्टै नै बिग्रने भै रहेको छ र कतिपय ब्याट्रीहरु एक दुइ बर्षमा नै खतम भैरहेका छन्. यसरी खतम हुन लागेका ब्याट्रीहरुको सम्भार गरेर तिनीहरुको Life कम्तिमा पनि एक दुइ बर्ष बढाउन सकिन्छ. यसको लागी काठमान्डूमा एउटा परिक्षणको काम सुरु गरेका छौं। यो टेक्नोलोजी जापान बाट ल्याइएको हो र एकदमै सरल छ। यस्तो किसिमको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर ब्यबसाय गर्न चाहाने ईच्छुक व्यक्तिहरुले पनि सम्पर्क राख्नु होला.
(यो कामको लागी यो इमेल प्रयोग गर्नुहोस। )
आइतबारको खेलमा पथरी र वि.सी.सी दमक विजयी
क्वाटरफाइनल खेलमा सेभेन स्टार क्लब इटहरी र न्यू दमक क्रिकेट क्लब दमक विजयी ।